Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda oo kulan laqaatey Wfdi ka socda Hay’adda Cunada Adduunka oo maalmahaan ku sugan Magaalada Muqdisho. – Radio Baidoa
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda oo kulan laqaatey Wfdi ka socda Hay’adda Cunada Adduunka oo maalmahaan ku sugan Magaalada Muqdisho.
By Webmaster	 On Jan 23, 2020
Magaalada muqdisho waxaa Manta kulan ku yeeshay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdieaxmaan Ducaale Beyle io Wfdi ka socda Hay’adda Cunada Adduunka oo maalmahaan ku sugan Magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ka dhacay Xarunta Waaaradda Maaliyadda ayaa waxaa Wafdiga hay’adda WFP hoggaaminaya u qeybsanaha Hey’adda Cunada Aduunka ee Soomaaliya (WFP) Mr Cesar Arroyo,waana kulanka looga hadlay dardar gelinta h howlaha gargaarka ah ee WFP ay ka wado Soomaaliya.
“Waxaan maanta Xarunta W.Maaliyadda ku kulanay u qeybsanaha Hey’adda Cunada Aduunka ee Soomaaliya (WFP) Mr Cesar Arroyo iyo Wasiirka W.Gargaar ka XFS Xamza Saciid Xamza,Waxaan ka wada hadalnay sidii loo dar-dar galin lahaa howlaha gargaarka ah ee WFP ay ka wado Soomaaliya ayuu yiri”Wasiir Beyle.
Hay’adda Cunada Adduunka ee WFP iyo dowladda Soomaaliya ayaa shalay waxaa ay kala saxiixdeen heshiis ku kacaya 1.03 bilyan oo doolar oo gargaar Bani’aadanimo lagu gaarsiinayo Shacabka Soomaaliyeed.
madaxweyne cabdi casiis oo kulamo ka wada Magalada Nairobi
madaxweynaha hirshabeele oo shaaciyey xilliga ay dhacayaan doorashooyinka Hir-Sabeelle
Ciidanka Xoogga Dalka oo gaaray afaafka hore ee Degmada Jamaame
Kumaandooska Danab iyo Ciidanka Mareykanka oo hawlgal ka fuliyay Dajuma
Turkiga oo shaaciyay heshiis 5-sano ah, laguna sahminayo kheyraadka Soomaaliya